बागीको बिगबिगी : को विरुद्ध को बागी उम्मेदवार ? (सूची सहित) « Deshko News
बागीको बिगबिगी : को विरुद्ध को बागी उम्मेदवार ? (सूची सहित)
आफूले टिकट नपाएपछि नेताहरुले बागी उम्मेदवारी दिएका छन् । यसरी उम्मेदवारी दिनेहरुमा शीर्ष नेताको चुनावी क्षेत्रदेखी कनिष्टसम्मको क्षेत्रमा बागी उम्मेदवारी परेको छ ।
तनहुँ १ मा रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीले उम्मेदवारी दिएका छन् । ०४८, ५१ र ५६ मा सोही क्षेत्रबाट जितेका जोशीले यसपालि आफ्नो क्षेत्रमा पौडेलले अतिक्रमण गरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
नारा–जुलुससहित उम्मेदवारी दर्ता गरेका जोशीले आफू आधिकारिक भएको र पौडेल बागी भएको दाबी गरेका छन् ।
सप्तरीमा उपेन्द्र यादवविरुद्ध बागी
सप्तरी २ मा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवविरुद्ध राजपाका सहमहामन्त्री जयप्रकाश ठाकुरले बागी उम्मेदवार दिएका छन् ।
राजपा र फोरमबीच प्रदेश २ मा तालमेल भएको छ । तर, पार्टीले सल्लाह नगरी उम्मेदवार छनोट गरेको भन्दै ठाकुरले उम्मेदवारी दिएका हुन् ।
महोत्तरीमा महन्थ ठाकुरविरुद्ध बागी
महोत्तरी ३ बाट उम्मेदवार बनेका राजपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरविरुद्ध पार्टीकै निवर्तमान सांसद चन्द्रेश्वर झाले उम्मेवारी दिएका छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा १ नम्बर सूचीमा रहेका उनी प्रत्यक्षमा लड्न आएका हुन् ।
सर्लाहीबाट निर्वाचन लड्दै आएका ठाकुर कांग्रेसको आग्रहमा महोत्तरी पुगेका हुन् । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र निर्वाचित झा केही महिनाअघि मात्रै राजपा प्रवेश गरेका थिए ।
सल्यानमा वाम गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेदवार टेकबहादुर बस्नेतविरुद्ध माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य उमाकान्त शर्मा र जिल्ला नेता ज्ञानबहादुर वलीले उम्मेदवारी दिएका हुन् ।
प्रदेश सभातर्फ (क) मा पनि वाम गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेदवार एमालेका गुलावजंग शाहविरुद्ध माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य भीमप्रकाश शर्माले बागी उम्मेदवारी दिए ।
यस्तै, प्रदेशतर्फ (ख) मा पनि वाम गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेदवार प्रकाश ज्वालाविरुद्ध माओवादी केन्द्रकै जितबहादुर पुनले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
उदयपुर २ मा एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैले प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारी दिएका छन् । एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले साँझ ६ बजे अध्यक्ष केपी ओलीको हस्ताक्षरसहितको मनोनयनपत्र दर्ता गराएका हुन् ।
उदयपुर १ मा एमाले र २ मा माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी दिने सहमति भए पनि खतिवडाले पार्टी अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको मनोनयनपत्रसहित उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । सो क्षेत्रमा माओवादीले सुरेश राईको उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ ।